Grand #OromoProtests Rally in Washington DC, September 29, 2016 -
SBO Fulbaana 30, 2016
LAMMIITU LAMMIIF DIRMATA, OROMOON WAL MALEE MAAL QABA!
2 thoughts on “Grand #OromoProtests Rally in Washington DC, September 29, 2016”
Jiraadhaa Oromoo! Horaa Bulaa!
Bilisoomuun Oromoo fi Walaboomuun Oromiyaa dhibbaa dhibbatti kan mirkkanaawee dha.
Kanaafuu tattaaffii fi jabinni Oromoon bakkuma hundatti gochaa jiru hedduu kan nama hamilchiisuu dha. Kana daran jabaachuun Umurii Diinaa gabaabsa waan ta’eef daran haa jabaannu! Wal illee haa jajabeesinu!
Waan namichi Ixoophiyaa sun jedhe dhageessanii? “Aniin hawaasa Xoophiyaa bakka bu’ee hin dhufne. Ofiin bakka bu’e” jedhe. Hinumaa iyyuu, waltajjii hawaasi Oromoo qopheesse irratti akka haasa’uuf carraan oggaa kennamuuf daqiiqaa inni fudhate argitanii? Hawaasa Ixoophiyaa irraa jedhamee ogguu haasaaf hafeeramu inni ammoo, hawaasa xoophiyaa akka bakka hin buune ibsate. kana jechuun, akka hawaasa Xoophiyaatti yoo haasawe, hawaasi xoophiyaa gaaffii Oromoo akka deggeretti hubatamuu waan danda’uufi. Kana jechuun, warri Xoophiyaa( Amahaaraa) amma illee, gaaffii Oromoon gaafatu akka itti hin amannee fi hin fudhatne agarsiisa. Xoophiyaa ijaaruu keessattii Oromoon qooda guddaa qabaatuus tuqe. Gabrummaa Minilik mormuun Oromoo miliyoona shan ajjeeffame dhiisee, hirmaannaa Goobaanaa Daaccee fi Oromoo tokko tokko bitamaniin Oromoon xoophiyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaa qabaataa turan jedha. Kun ammoo, ilaalcha tokkummaa xoophiyaa Oromoo irratti dhiibuuf Amaaroti qaban qofa osoo hin taane, tokkummaa xoophiyaa Oromoo irraa tiksuuf ajjeechaa, hidhaa, saamichi fi gudeeddiin Oromoo irratti geggeeffame sirri akka ta’etti dhiyeessuu fi kana itti fufuunis hojii sirnaa akka ta’etti dhiyeessuu dha. Waa’ee Oromoo irratti, mataa Tigrootaa fi Amaharotaa keessa kan jiru kana. Waldhabbiiin Amahaaraa fi Tigree gidduu, qabeenyaa Oromoo qirchachuu fi caalaatti Oromoo bituu irratti. Lameen isaanii Oromoo ergachuu fi dachii Oromiyaa saamuu irratti waldhabu malee dimookraatummaan wal caalanii ykn mirga ummata Oromoo beekuu fi kabajuu irratti walcaalanii miti. Waan kana ta’eef, Oromoon, akka sabaatti ijaaramee mirga isaa akka asiin gahetti, akka sabaa qofatti ijaaramee fi kanneen mirga hiree murteeffannaa Oromoo, kan referendum bilisa ta’e irratti Oromoon biyya mataa isaa ijaarratuuf sagalee kennatuuf mirga inni qabu ifatti amananii fudhatuun labsan qofa waliin tumsa tolfatee qabsoo ummata Oromoo, alaabaa mootummaa walaba Oromiyaa masaraa fi caffee Ixoophiyaa irra dhaabuun xumura itti gochuu qaba. Eerga kana bakkaan gahee booda, bilisa ta’ee bakka bu’oota filatu keessaan tokkummaa fedha fi dantaa Oromiyaa kabachiisu tolfatuuf hojjeta. “We are our own liberators. Lets those who do not believe in the capacity of Oromoo people to liberate themselves do not put their hands on the destiny of this intelligent and pround people!” Gaaffii ummata Oromoo sadarkaa kanaan gahuuf obsaa fi muratnoon adeemsa dheeraa fi wareegama guddaa kafalchiise qofaa keenya deemneeerra. Karaa qulqulluunis kanuma. Qofuma keenya itti fufnee bakkaan gahuuf akka sabaatti qofa qabsaawuu dha.Amarooti sochii ummata Ormootti makamanii, gaaffii ummata Oromoo bubureessuun ummata Oromoo keessatti afanfaajjii fi garaagarummaa uumuu barbaadu. Naannoo isaanii, Gondar, Goojjam, Walqaayit fi tigraay keessatti, sochii isaan geggeessaniif deggersa hamilee kennuun, achi irratti of ijaaranii, abbayya ykn mormor cehuun tigree bakka bu’anii Oromoo fi Oromiyaa irratti weerara haaraa banuun tigree bakka bu’uuf fedhii isaan qaban gowwummaa keenyaanb akkan gahuu hin qabnu. Seenaa, amala, fedhii, akeeka fi shira Habashootaa kan akka gaariitti hubatee qabsoo ummata Oromoo isaa irraa tiksuun asii gahe ABO qofa. Fuuldudrattis shira isaanii irraa qabsoo kana tiksee bakkaan gahuuf muuxannoo fi gahummaa jaarmaa kan qabu ABO qofa. Eerga Oromiyaan walaboomtee labsamtee booda, agendaan itti Oromiyaa deebisanii ijaaruu fi mishoomsuu dha. Addi Bilisummaa Oromoo, Oromian Reconstruction Marshal Plan irratti hojjechaa jira. Akeeki kun akka bakka gahuuf, Gobaanoota Amaahaaraa fi tigree, akkasumas, ergamtoota faranjii ta’uun Adda Bilisummaa Oromoo fi sochii Qeerroo dura dhaabbachuuf kanneen eegee raasaa jiran dhaabota fi gartuulee Oromoo hunda kaardii diimaa itti agarsiisuun, karaa duraa maqsee sochii isaa gara bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti godhaa jiru jabeessee itti fufuu ummatni Oromoo.Alaabaan ABO, kan Oromoo hundi ofitti fudhate, mallattoo tokkummaa xoophiyaa osoo hin taane, mallattoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa ti. Alabaan kun, awwaala tokkummaa xoophiyaa irratti kan dhaabbatu fi kan walabummaan Oromiyaa ittiin tikfamuu dha.
Oromiyaan dhiiga ilmaan isiitiin ni bilisoomti !
Tokkummaan Oromiyaa fi Xoophiyaa, tokkummaa silmii fi loonii ti !